Tag: wufoo | Martech Zone
Adreesị Adreesị Email Nhicha: Ihe Mere I Ji Chọrọ Hygiene Email na Otu Esi Họrọ Ọrụ
Fraịde, Machị 5, 2021 Tuesday, April 27, 2021 Douglas Karr
Email marketing bụ egwuregwu ọbara. N'ime afọ 20 gara aga, naanị ihe gbanwere site na email bụ na ndị na-ezigara email na-aga n'ihu na-ata ndị ọzọ ahụhụ site n'aka ndị na-enye ọrụ email. Ezie na ndị ISP na ESP nwere ike ịhazi ihe ma ha chọọ, ha anaghị eme ya. Nsonaazụ bụ na enwere mmekọrịta mmegide n'etiti ha abụọ. Ndị na-enye ọrụ ịntanetị (ISPs) gbochie ndị na-enye ọrụ Email (ESPs)… wee manye ESP igbochi.
Pulse: Mee ntụgharị 10% na Nkwado Ọha
Monday, July 13, 2020 Tọzdee, Machị 4, 2021 Douglas Karr
Weebụsaịtị na-agbakwunye ọkọlọtọ na-egosi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-akwalite ọnụego ntụgharị ha na ntụkwasị obi ha. Pulse na-enyere ndị azụmaahịa aka igosipụta ọkwa nke ezigbo ndị mmadụ na-eme ihe na saịtị ha. N'ime ebe nrụọrụ weebụ 20,000 na-eji Pulse wee nweta mmụba ntụgharị nke 10%. Enwere ike ịhazi ọnọdụ na oge nke ọkwa ahụ nke ọma yana, mgbe ha jidere mmasị onye ọbịa ahụ, ha anaghị atụgharị uche na ebumnuche onye ọbịa ahụ nọ ebe ahụ. Ọ mara mma
Ibu: Meewanye Mmepụta, Mmekọrịta, na Mmekọrịta Mmepụta Ọdịnaya Gị
Fraịde, Ọktọba 23, 2015 Monday, December 7, 2020 Douglas Karr
Amaghị m ihe anyị ga-enwe ike ime na-enweghị njikọta njikọta maka imepụta ọdịnaya anyị. Ka anyị na-arụ ọrụ na infographics, akwụkwọ ọcha, na ọbụlagodi blog, usoro anyị na-esite n'aka ndị nyocha, ndị edemede, ndị na-emepụta ihe, ndị editọ na ndị ahịa anyị. Nke ahụ bụ nnọọ ọtụtụ ndị metụtara itinyefe faịlụ na azụ n'etiti Google Docs, DropBox ma ọ bụ email. Anyị chọrọ usoro na nsụgharị iji mee ka ọganihu gaa n'ihu n'ọtụtụ
Gbanwee: Igwe igwe CRM zuru oke maka SMB
Fraịde, Septemba 6, 2013 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Ahịa Mmekọrịta Management usoro bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ọjọ… belụsọ na ha mepụtara nke ọma. Ọ bụrụ na ọ bụ sistemụ siri ike, ọ chọrọ ka ụlọ ọrụ ahụ nwee nsogbu na ndị ọrụ ya, ọ chọrọ oge na ume dị ukwuu, yana enyeghị gị ndụmọdụ bara uru. Usoro ọhụụ CRM ọhụrụ na-apụta ugbu a na-eme ka ha nwee ike ịkọwa usoro nke ndị ahịa na ndị ahịa na-ewere. Converge na-akọwapụta onwe ya dị ka igwe ojii dị ike, ma dị mfe CRM maka obere